Local Gold Market Cools Due to Meager Demand Amid COVID-19 | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocal Gold Market Cools Due to Meager Demand Amid COVID-19
Local Gold Market Cools Due to Meager Demand Amid COVID-19
While gold colletors are disposing of their gold, gold shops find it difficult to boost sales due to lower demands amid the COVID-19 pandemic, according to gold sellers.
“The market is likely to remain the same for the next twenty days,” U Ohn Mying, General Secretary of Myanmar Gold Entrepreneurs Federation, told Myanmar Business Today.
He concluded that it might be because of the suspension of factories and difficult transportation during and after lockdown, but it is hard to link this to the COVID-19.
Gold traders estimate that demands for gold have dropped by 50 percent compared to days before the COVID-19.
Gold price at the time of writing is $1,777.11 per ounce in the international market and K1.22 million per tical (0.67 ounces) in the domestic market.
Local gold prices correspond to global gold prices. On May 22, the global gold price was $1,741 per ounce while the local gold price was K1.215 million per tical. On June 22, the global rate surged to $1,750, and the local rate increased to K1.218 million.
ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်း ဝယ်လိုအား ဆင်းကာ အရောင်းအဝယ်ရပ်တန့်အေးစက်နေကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ပြောဆိုသည်။
ယခုကာလတွင်ရွှေ၀ယ်ယူထားသူတချို့ ရွှေထည်များကို ဆိုင်များတွင်ရောင်းချမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ဆိုင်များအနေဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချရန် ခက်ခဲလျက်ရှိကာ နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်မှုမရှိသေးကြောင်းရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ပြောဆိုသည်။
“နောက်ထပ် ရက်နှစ်ဆယ်လောက် ဒီအတိုင်းပဲ စျေးကွက်အခြေအနေရှိနေ အုံးမယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးအုန်းမြိုင်က myanmar business today ကိုပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရွှေစျေးကွက်အေးစက်နေခြင်းသည် COVID-19 ကြောင့်ဟု တိုက်ရိုက်မပြောနိုင်သော်လည်း စက်ရုံအလုပ်ရုံတချို့ ရပ်နားခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနည်းပါးခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း ရွှေ ရောင်း၀ယ်သူတချို့က ခန့်မှန်းသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေ ပေါက်ဈေးများမြင့်တက်လာသော်လည်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်နည်းပါးကာ ၀ယ်လိုအားငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်း ရပ်တန့်နေကြောင်း ရွှေရောင်း၀ယ်သူတို့ထံမှသိရသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေပေါက်ဈေးသည် တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၅၀ ထိ မြင့်တက်လျက် ရှိသော်လည်း ပြည်တွင်းရွှေ ဈေးနှုန်းများတွင် ၁၂ သိန်း ၂ သောင်း ဝန်းကျင်သာ ပေါက်ဈေးရှိကြောင်းသိရသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းသည် မေလအတွင်းက ၁၄၀၀ ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီး ဇွန်လတွင် ၁၃၈၉ ကျပ် ဝန်းကျင်အထိသာရှိရာ ဒေါ်လာဈေးကို မှီခိုရောင်း၀ယ်သော ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ် နည်းပါးလာကြောင်းရွှေ ရောင်း၀ယ်သူများကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိ မိုးရာသီကာလများသည် ရွှေထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသည့် ကာလဖြစ်သည့်အပြင် ဈေးကွက်အတွင်း ဝယ်ယူသူနည်းပါးပြီး ရောင်းချသူပိုများပြားခြင်းကြောင့် အခေါက်ရွှေသာမက လက်ခအထည်များလည်း အရောင်းအဝယ် နည်းပါးနေကြောင်လည်းသိရသည်။
မေ၂၂ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေပေါက်ဈေး တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၄၁ ပေါက်ဈေးရှိချိန်တွင် ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၁၂၁၅၀၀၀ ခန့်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီး ၊ ဇွန် ၂၂ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေပေါက်ဈေး တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၅၀ ရှိချိန်တွင် ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင် ၁၂၁၈၀၀ဝ ကျပ် ဖြင့်ပေါက်ဈေးရှိသည်။
Previous articleMyanmar Earns Nearly $600 Million from Rice Export
Next articleRetail Sales Slashed by 80 percent Due to the COVID-19